Home > Ihe niile I Kwesịrị Aboutmara Banyere Nicotinamide Riboside Chloride
Ọ bụrụ n'ị na-achọ onye anaghị eri anụ Nicotinamide Riboside chloride mgbakwunye, anyị na-akwado mgbakwunye Cofttek Nicotinamide Riboside. Lọ ọrụ na-arụpụta ihe na Nicotinamide Riboside mgbakwunye yana ya mere, mmadụ nwere ike ijide n'aka na mgbakwunye ndị ụlọ ọrụ mebere dị oke mma. Na Cofttek Nicotinamide Riboside mgbakwunye na-abịa dị mfe iji rie capsules, nke dị mfe ilo. Achọrọ ka ndị ọrụ were naanị otu capsule kwa ụbọchị.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-achọ gluten, egg, BPA, akụ, ndị na-echekwa ihe na ngwaahịa na-enweghị mmiri ara ehi, anyị na-akwado itinye ego gị na mgbakwunye Cofttek Nicotinamide Riboside. Ihe mgbakwunye a jikọtara NR na flavonoids. Ha abụọ na - eme ka ọrụ sirtuin dịkwuo mma. Karịsịa, Cofttek na-ekwu na ọ na-eme nyocha anọ nke nyocha ọ bụla na mgbakwunye ya, yabụ, mgbakwunye nke ụlọ ọrụ ahụ enweghị nchekwa. Ọzọkwa, a na-emepụta mgbakwunye ndị a na ụlọ ọrụ cGMP a kwadoro na ụlọ ọrụ a kwadoro TGA
Gịnị bụ Nicotinamide Riboside Chloride?
Nicotinamide Riboside Chloride ma ọ bụ Niagen bụ ụdị kristal nke Nicotinamide Riboside, nke bụ vitamin NAD + dị n'ihu. Ọ bụ ezie na Nicotinamide Riboside dị 255.25 g / mol, Nicotinamide Riboside Chloride nwere 290.70 g / mol na 100 mg nke Nicotinamide Riboside Chloride na-enye 88 mg nke Nicotinamide Riboside. A na-ewere NR adịghị mma iji rie nri.
Ọ bụ ezie na Nicotinamide Riboside bụ ụdị Vitamin B3, ihe ya dị iche iche na-eme ka ọ dị iche na ọtụtụ ndị ọzọ so na vitamin B3, dị ka nicotinamide na niacin. Ọ bụ ezie Niacin na-eme ka akpụkpọ ahụ na-agbapụ site na ịgbalite nnabata njikọta GPR109A G-protein, Nicotinamide Riboside adịghị emeghachi omume na onye nnabata ihe a, yabụ, ọ naghị ebute mbube akpụkpọ ahụ, ọbụlagodi mgbe a na-eri ya na oke ọnụọgụ 2000 mg kwa ụbọchị. Ọzọkwa, nyocha ndị e mere na ụmụ oke ekpughere na Nicotinamide Riboside bụ NAD + nke butere mgbatị kachasị elu na Nicotinamide Adenine Dinucleotide ma ọ bụ NAD + n'ime ahụ.
Nicotinamide Riboside pụtara na nri mmadụ ma otu oge n'ime ahụ, ọ na-agbanwe na NAD +, nke ahụ dị ya mkpa maka ọtụtụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, nyocha sayensị gosipụtara na Nicotinamide Riboside Chloride ma ọ bụ NAD + nke NR nyere na-eme ka ọrụ mitochondrial dị ka nke ọma ma nwee mmetụta insulin site na ịgbalite ezinụlọ sirtuin nke enzymes, nke bụ ọrụ maka ịhazi metabolism nke oxidative n'ime ahụ.
Ruo ugbu a, emeela ọmụmụ ise iji mụọ nchekwa na arụmọrụ nke Nicotinamide Riboside na ọmụmụ ndị a achọpụtala ogige ahụ dị mma maka ojiji mmadụ.
Ihe kpatara Anyị ji chọọ Nicotinamide Riboside Chloride
Industrylọ ọrụ ịchọ mma bụ ụlọ ọrụ ijeri dollar, ọ bụ n'ihi na ụmụ mmadụ na-eche banyere ọdịdị ha. Nke a bụkwa isi ihe kpatara nyocha gbasara ihe ndị na-egbochi ịka nká na ngwaahịa ji nwee ọganiihu dị egwu na obere oge. Ndị na-emekọ ihe ọnụ na ụwa ghọtara na enwere ego iji mee ka ọchịchọ ndị mmadụ nwee ịnọrọ ruo mgbe ebighi ebi, wee nwee ìgwè n'otu ebe, na-etinye ụbọchị na izu iji chọta ihe na ngwaahịa ndị nwere ike ime ka ahụ dịkwuo mkpa. Achọpụtara Nicotinamide Riboside ma ọ bụ Niagen n'ihi nchọta a na-akwụsịbeghị maka ngwaahịa na-aka nká. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ọgwụ ndị na-egbochi ịka nká na-ebelata ihe ịrịba ama nke ịka nká site na akpụkpọ ahụ, Niagen na-ebelata ihe ịrịba ama nke ịka nká n'ime ahụ. Nicotinamide Riboside ma ọ bụ Niagen bụ ụdị kristal Nicotinamide Riboside Chloride na ozugbo n’ime ahụ, ọ na-agbanwe n’ime NAD +, nke bụ ọrụ maka ịka nká na ọrụ ndị ọzọ dị mkpa.
N'isiokwu a, anyị kpuchiri akụkụ niile nke ihe ịtụnanya a, gụnyere uru ya, nsonaazụ yana usoro kwesịrị ekwesị.
Nicotinamide Riboside Chloride Ọ Dị Nchebe?
Otutu ihe omumu emere rue ugbua achoputa Nicotinamide Riboside oriri di na 1000 rue 2000 mg kwa ubochi maka ojiji mmadu. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na a chọrọ ọmụmụ ihe ndị ọzọ na mpaghara a, ndị na-emepụta Nicotinamide Riboside na-atụ aro ka mmadụ na-eri NR kwa ụbọchị n'okpuru 250-300 mg kwa ụbọchị.
Ọ bụ ezie na Nicotinamide Riboside ma ọ bụ Nicotinamide Riboside Chloride oriri dị mma, ọ nwere ike ibute mmetụta ndị dị ka ọgbụgbọ, isi ọwụwa, afọ mgbu, ike ọgwụgwụ na afọ ọsịsa. Ọ bụrụ n ’inwe otu n’ime mgbaàmà ndị a mgbe ị na-ewere ihe mgbakwunye NR, gwa dọkịta gị ozugbo. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na enweghị ihe akaebe zuru oke banyere mmetụta nke Nicotinamide Riboside na ụmụ nwanyị dị ime na ndị na-enye ara, otu a kwesịrị ịhapụ iji mgbakwunye Nicotinamide Riboside.
Nicotinamide Riboside Chloride nwere uru
Tupu anyị atụle ihe uru nke Nicotinamide Riboside Chloride, ọ dị mkpa ịkọwapụta na ebe ọ bụ na Nicotinamide Riboside Chloride bụ nnu nke a na-enweta Nicotinamide Riboside, uru Nicotinamide Riboside Chloride bụ otu uru nke Nicotinamide Riboside.
Nicotinamide Riboside Chloride na-akwalite ịka nká
NAD + nke Nicotinamide Riboside Chloride na-arụ ọrụ n'ime ahụ na-eme ka enzymes ụfọdụ metụtara njikọta ahụike. Otu enzyme dị otú ahụ bụ sirtuins, nke ejikọtara ya na ndụ niile ka mma na ndụ ụmụ anụmanụ. Nnyocha sayensị egosiwo na sirtuins na-eme ka ndụ dịkwuo mma na ịdị ogologo ndụ site na mbenata mbufụt, na-eme ka uru ndị metụtara mmachi calorie na idozi DNA mebiri emebi. NAD + nke Nicotinamide Riboside Chloride rụọ ọrụ na-arụkwa Poly Polymerases nke a maara iji dozie DNA mebiri emebi. Ọzọkwa, ọtụtụ ọmụmụ sayensị jikọtara ọrụ nke polymerases yana afọ ndụ enyerela. (1)Conze, D., Brenner, C. & Kruger, CL Nchedo na Metabolism nke Ogologo oge
② Ọ na-ebelata ohere mmadụ nwere ibute ọrịa obi
Agka nká na-emekwa ka mmadụ nwekwuo ohere ịrịa ọrịa obi. Ka ndị mmadụ na-eme agadi, akwara ọbara ha na-ebuwanye ibu ma sie ike, nke n’aka nke ya, na-eduga n’ọbara mgbali elu. Mgbe ọbara mgbali n'ime arịa ahụ na-abawanye, obi ga na-arụ ọrụ nke ọma karịa abụọ iji gbanye ọbara, nke na-ebute ọrịa obi dị iche iche. NAD + nke Nicotinamide Riboside Chloride nyere na-agbanwe mgbanwe ndị metụtara afọ nke kpatara arịa ọbara. Enwere otutu ihe omuma sayensi iji gosi na Nicotinamide Adenine Dinucleotide ma obu NAD + na - ebelata oke akwara obara ma na - edozi obara mgbali systolic.
Nicotinamide Riboside Chloride Na-enye Nchekwa na Mkpụrụ Mkpụrụ ụbụrụ
Nicotinamide Riboside na-echebe mkpụrụ ndụ ụbụrụ. Otu nnyocha e mere na ụmụ oke gosiri na mmepụta NR nke NR mụbara mmepụta nke PGC-1 mkpụrụ alpha site na 50%. PGC-1 alpha protein na-enyere aka ichebe sel ụbụrụ site na nrụgide oxidative ma melite ọrụ mitochondrial. N'ihi ya, nri NR n'ime ụmụ mmadụ na-echebe megide ọrịa ụbụrụ na-emetụta afọ, dị ka Alzheimer na Parkinson. Otu nnyocha nyocha emere mụọ banyere ogo NAD + na ndị na-arịa ọrịa Parkinson. Ọmụmụ ihe ahụ kwubiri na NAD + mere ka ọrụ mitochondrial dịkwuo mma na mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ.
Uru ndị ọzọ bara uru nke Nicotinamide Riboside Chloride
Ndị ọzọ karịa uru a tụlere n'elu, ebe a bụ uru ole na ole ndị ọzọ jikọtara na Nicotinamide Riboside Chloride.
i.A maara NR iji mee ka ike akwara, ọrụ na ntachi obi nwee ike, yabụ, a na-ejikọ ike oriri nri na NR na ịrụ ọrụ egwuregwu.
ii.Dị ka a tụlere n'elu, mmepụta nke NR nke NAD + na-edozi DNA mebiri emebi ma na-enye nchebe pụọ na nrụgide oxidative. Nke a, n’aka nke ya, na-ebelata ohere mmadụ nwere ibute ọrịa kansa.
iii.Nnyocha nyocha nyochapụtara mmetụta nke Nicotinamide Riboside na metabolism na ụmụ oke. Ọmụmụ ihe ahụ kwubiri na NR mụbara metabolism na ụmụ oke. N'agbanyeghi ihe achoro nke sayensi ozo banyere nke a, otutu ndi sayensi kwenyere na Nicotinamide Riboside ga enwe mmekorita yiri ya na mmadu ma ya mere, kwesiri inye aka n'ibu oke.
Nicotinamide Riboside Chloride Ntughari
Ọmụmụ ihe ọmụmụ ise emerela achọpụtala na Nicotinamide Riboside enweghị nchekwa maka ọdịmma mmadụ. Agbanyeghị, ọmụmụ ndị a ehiwela nchekwa Nicotinamide Riboside Chloridedosage ịgba maka mmadụ n'etiti 1,000 ruo 2,000 mg kwa ụbọchị. Agbanyeghị, ekwesiri iburu n’uche na ọmụmụ ihe niile nyochara nchekwa nke Nicotinamide Riboside nwere obere etu ha si wee dị, a chọrọ nyocha ndị ọzọ na mpaghara a.
Ebumnuche bụ isi nke Nicotinamide Riboside Chloride bụ iji nye Nikotinamide Riboside Chloride ma ọ bụ Niagen ahụ. Niagen ma ọ bụ NR na-abụkarị n'ụdị abụọ: mbadamba na capsules. Ọtụtụ ndị na-emepụta Nicotinamide Riboside na-ejikọ NR na kemịkal ndị ọzọ, dị ka Pterostilbene. N'ọnọdụ ọ bụla, iji bụrụ nchekwa, ọtụtụ ndị na-emepụta mgbakwunye na-atụ aro idowe oriri nke NR kwa ụbọchị n'etiti 250 ruo 300 mg kwa ụbọchị.
Ebee ka ịzụta Nicotinamide Riboside Chloride Powder na Bulk?
Ọchịchọ maka nri Nicotinamide Riboside amụbawo nke ukwuu n'ime afọ ole na ole gara aga, isi n'ihi na Nicotinamide Riboside nwere ọtụtụ uru. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịbanye na ahịa Nicotinamide Riboside, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọta onwe gị dị ka onye ahịa tụkwasịrị obi. Ebee ka zụta Nicotinamide Riboside Chloride ntụ ntụ na nnukwu? Azịza ya bụ Cofttek.
Cofttek bụ onye na-ebubata ngwa ahịa nke malitere na 2008 ma naanị ihe dị ka afọ iri, ụlọ ọrụ ahụ ehiwela ọnụnọ ya n'ọtụtụ mba. Ndị ọzọ karịa ịmịpụta ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ya, a na-elekwasịkwa anya na ụlọ ọrụ na-enwe ọganihu n'ọhịa nke biotechnology, teknụzụ kemịkal na ule kemịkal. Companylọ ọrụ ahụ na-agba mbọ na nyocha dị mma, nke na-eme ka ọ nwee ihu ọma karịa ndị ọzọ na-eweta ya n'ahịa ahụ. Na Nicotinamide Riboside Chloride ntụ ntụ nke ụlọ ọrụ ahụ nyere na-abata na nchịkọta nke 25 kgs ma nwee ntụkwasị obi maka mma. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọmarịcha ahịa na ndị otu na-akwado ndị ahịa ga-elekọta mkpa gị niile ma jụọ gị ezigbo oge. Nke a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta Nicotinamide Riboside Chloride ntụ ntụ na nnukwu, tụkwasị obi naanị Cofttek ..
(1).Conze, D., Brenner, C. & Kruger, CL Nchedo na Metabolism nke Nchịkọta Ogologo nke NIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) na Randomized, Double-Blind, Ebe Nlekọta Ọgwụ Na-ahụ Maka Ahụ Ike Ndị toro eto. Sci Rep9, 9772 (2019)
(2).Carlijn ME Remie, Kay HM Roumans, Michiel PB Moonen, Niels J Connell, Bas Havekes, Julian Mevenkamp, ​​Lucas Lindeboom, Vera HW de Wit, Tineke van de Weijer, Suzanne ABM Aarts, Esther Lutgens, Bauke V Schomakers, Hyung L Elfrink, Rubén Zapata-Pérez, Riekelt H Houtkooper, Johan Auwerx, Joris Hoeks, Vera B Schrauwen-Hinderling, Esther Phielix, Patrick Schrauwen, Nicotinamide riboside supplementation mejupụtara anụ ahụ na akwara akwara acetylcarnitine na-eme ka mmadụ nwee ahụ ike zuru oke, Akwụkwọ akụkọ American Journal of Clinical Nutrition, Olu nke 112, Isi nke 2, Ọgọst 2020, Peeji nke 413–426
(3) M., Lucas, S., Akerman, I., Seabright, A., Lai, YC, Tennant, DA, Nightingale, P., Wallis, GA, Manolopoulos, KN, Brenner, C., very Lavery, GG (2019 ). Nicotinamide Riboside na-eme ka ọkpụkpụ Skeletal Muscle nke agadi NAD + Metabolome na Induces Transcriptomic na Anti-inflammatory Signatures. Akụkọ Cell, 28(7), 1717-1728.e6.
(4).Nicotinamide riboside chloride ntụ ntụ
(5).Njem inyocha egt.
(6).Oleoylethanolamide (oea) - anwansi anwansi nke ndu gi.
(7).Anandamide vs cbd: kedu nke ka mma maka ahụike gị? Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ha!
(8).Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nicotinamide riboside chloride.
(9).Palmitoylethanolamide (agwa): uru, onunu ogwu, ojiji, mgbakwunye.
(10).Top 6 uru uru nke resveratrol Mmeju.
(11).Ihe 5 kacha elu na-ewere phosphatidylserine (ps).
(12).Top 5 uru nke ị pụ pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13).Ihe kacha mma nootropic nke alpha gpc.
(14).Ngwunye kachasị mma nke ịka nká nke nicotinamide mononucleotide (nmn).
Anandamide VS CBD: Kedu nke dị mma maka ahụike gị? Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Ha!